အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့်ပြသပါသတင်း NAB ။ NAB ပြရန်, NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ထုတ်လုပ်သူ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်လွှင့် - စာမျက်နှာ 853 - NAB ပြရန်သတင်းများ: အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ, တီဗီ & ရေဒီယိုနည်းပညာနှင့် Post ကိုထုတ်လုပ်မှုသတင်းများ။ NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ထုတ်လုပ်သူ
ရိုး ai SeedInvest ရန်ပုံငွေရှာခြင်းကင်ပိန်းလွှတ်တင်
ဘော်စတွန်အခြေစိုက်ရိုး ai ထပ်သတင်း၌တည်ရှိ၏။ အဆိုပါအကြီးအကျယ်ဖြေရှင်းရန်ဆက်လက်အဆိုပါရှေ့ဆောင်ကုမ္ပဏီ ...
Postium ကိုရီးယား, Ltd. , အမေရိကတိုက်အသစ်ဖြန့်ချိကိုကြေညာ
broadcas များအတွက် definition video စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဖြေရှင်းချက်၏ Postium ကိုရီးယား, Ltd, ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်သူ ...
2019 NAB Show မှာကျင်းပမည့်ဒုတိယအကြိမ်နှစ်ပတ်လည်ခရီးသွားခြင်း VIDEO Awards
- ဝါရှင်တန်ဒီစီ - - NAB Show ကို New York မြို့မှာပြားထည့်သွင်းရန် Expanded မိတ်ဖက်အဆိုပါ T က ...
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာညီလာခံအတွက်စက္ကူအဆိုပြုချက်ကိုလက်ခံခြင်း NAB SHOW
လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံးအဆိုပါအသံလွှင့် En များအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာစက္ကူအဆိုပြုချက်လက်ခံတာဖြစ်ပါတယ် ...
FilmLight စစ်အေးတိုက်ပွဲ '' အဆိုပါအမေရိကန်နိုင်ငံသား '' ရှာဖန်တီး
စီးရီးခြောက်လ Technicolor PostWorks ဆဌမနှင့်နောက်ဆုံးသူဟာ Emmy ဆု wi မှာ HDR နှင့် 4K က Ultra HD ကိုများအတွက်အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသော ...
Demand ကိုလွှဖြေရှင်းချက်အပေါ် KHQ-TV ကို Supercharger ဒစ်ဂျစ်တယ်လောင်စာဖြင့် Video, Bitcentral ရဲ့ Linear
လပေါင်းများစွာအကြာကျွန်မ Bitcentral, သတင်းထုတ်လုပ်မှု၏ကြီးစိုး provider ကတခုတခုအပေါ်မှာဆောင်းပါးရေးသားခဲ့သည် ...
#NABSHOWNY: Broadfield အနီရောင်ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်အတူဖြန့်ဖြူးမိတ်ဖက်ကြေညာ
Broadfield ဝြေခင်း Inc ကိုဖဲကြိုးဖြတ်အနီရောင်ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်အတူဖြန့်ဖြူးမိတ်ဖက်တစ်ဦးကြေညာလိုက်ပါတယ် ...
#NABSHOWNY အဆိုပါဟု ICG ပြော Panel ကိုတင်ပြကိုသတိရနေတယ်မနေပါနဲ့: ဘယ်လို Unscripted ရုပ်မြင်သံကြား Multi-Cam Reinventing နေပါသည်!
အတော်များများကစက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များကျနော်တို့ Multi-ကင်မရာရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်နည်းလမ်းများရက်ပ်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို, သဘောတူ ...
VEGALUX 300 #NABShowNY မှာတွင်-Display ကို FRESNELS StudioLED
FLUOTEC များအတွက် LED ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလင်းရောင်လ်တာ၏ထုတ်လုပ်သူအနိုင်ရနှင့်ဦးဆောင်သည့်ပေါင်းစုံဆု ...
NAB Show ကို New York မြို့မှာ Calrec စျေးသစ် Impulse Core
Impulse core ကို AES67 နှင့် SMPTE 2110 connectivit အတူအစွမ်းထက်အသံအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်လမ်းကြောင်းအင်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ် ...
၏ The One နှင့်သာလျှင်, Robert De Niro ဖွင့်ပွဲ Keynote #NABSHOWNY
Robert De Niro (လိုအပ်ငါကပိုလို့ပြော) NAB Show ကို New York မြို့မှာ 2018 Show ကိုဖွင့်လှစ်နာမည်ကြီး headliner လိမ့်မည်။ de N က ...
IBC 2018 - #IBCShow ၏တစ်ဦးကရော့စ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
IBC ယင်းထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပြက္ခဒိန်အတွက်အကြီးမားဆုံး tradeshows တစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင့်တန်ဖိုးရှိသောဏကမ်းလှမ်း ...
Plura #NABShow New York မှာမြေပြင်-Breaking ထုတ်ကုန်များလွှတ်ပေးရန်
Plura ဒါကြောင့် high-performance ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လွှင့်နှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု၏ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်သူ ...
ATTO နှင့် avid: ကျော် 20 နှစ်များအတွက်လက်မှတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
ATTO နည်းပညာ, Inc, သူတို့ရဲ့ThunderLink® 40GbE နှင့် 10GbE ThunderboltTM3တစ်ခု adapters ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ...
#NABSHOWNY ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $ 100: နယူးယော့ POST PRODUCTION အစည်းအဝေးခန်း, NAB SHOW NEW YORK & AES ပြပွဲ
အချိန်နေဆဲရိုးရှင်းစွာ 100 ရက်ကြာအပြည့်အဝညီလာခံ Pass နှင့် (ကိုမှန်မှန် $ 2) ရက်နေ့မှာ $ 895 ချွတ်လက်ခံရရှိမှုအတွက်ကျန်ကြွင်းသော ...
Osprey ဗီဒီယို sta မှာ IBC2018, RAI အမ်စတာဒမ်မှာနည်းပညာကသူတို့အထင်ကြီးလိုင်းပြပါလိမ့်မည် ...
ဖီးလ် Myers ့ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်နည်းပညာများမောင်းနှင် Lawo, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ပူးပေါင်းထားပါတယ် ...
#IBC2018: Dell က EMC ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့တစ်ဖက်မှာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကမ်းလှမ်း
Dell က EMC, စက်တင်ဘာလ 7th-39th ပေါ် RAI အမ်စတာဒမ်အတွက် IBC ပြရန် 2018 မှာတဲ # 13.C18 အတွက်ပြပါလိမ့်မယ် ...
#IBC2018 အဆိုပါ Show ကိုသတိရနေတယ်မနေပါနဲ့!
အဆိုပါ IBC ပြရန် 2018 certainl လိမ့်မည်ဟုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပြပွဲနှင့်ကွန်ဖရရွေးချယ်မှုနှင့်အတူထုပ်ပိုးနေသည် ...
ကြီးထွားလာမီဒီယာကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့ရဲ့ post ကိုထုတ်လုပ်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွေ့အကြုံကဗီဒီယိုအင်ဂျင်နီယာရှာကြံနေပါတယ်။ ဒီအနေအထား, post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ထမ်းများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ပြဿနာများကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာ, troubleshooting, နှင့်ဗီဒီယိုကိစ္စများဖြေရှင်းမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဗီဒီယိုက post ကိုထုတ်လုပ်မှုကွန်ရက်နှင့် server ကိုတပ်ဆင်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိသည်သငျ့သညျ။ အဆိုပါစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက်ထုတ်လွှင့် post ကိုထုတ်လုပ်မှု၏လှုပ်ရှားမှုများကိုညွှန်ကြား, ဖွံ့ဖြိုးရေး, workflow နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအကောင်အထည်ဖော်ရေး။ စာရွက်စာတမ်းများ, ထောက်ခံမှုများနှင့်ကုမ္ပဏီကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် NLE အခြေခံအဆောက်အဦများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်စွမ်းကိုထိန်းသိမ်းပါ။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း Post ကိုထုတ်လုပ်မှု Workflows ၏ကျယ်ပြန့်နားလည်မှုရှိသင့်သည်။ ယခင်ကတစ် post ကိုထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ, ဒါမှမဟုတ်ပို့စ်ထုတ်လုပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတိပ် room.Knowledge မှာအတှေ့အကွုံရှိသင့် ...
Post ကိုထုတ်လုပ်မှုညှိနှိုင်းရေးမှူးမြောက်မြားစွာစီမံကိန်းများကိုလက်ရှိတင်ဆက်နှင့်အတူတစ်ကြီးထွားလာထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီအတွက်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခန်းကဏ္ဍများတွင်လူတစ်ဦးတစ်ဦးကယျြပွနျ့ Deliverable စာရင်းညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ရန်အချိန်ဇယားနှင့်မီဒီယာမန်နေဂျာများနှင့် pas ကြီးကြပ်ပါလိမ့်မယ်။ အသေးစိတ်ဖို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုရှိပြီးသူတစ်ဦးရှာဖွေနေ, လေ့လာသင်ယူပြီးအကြီးအကုမ္ပဏီအထောက်အကူပြုရန်စိတ်အားထက်သန်, Self-လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ညှိနှိုင်းရေးမှူးထိုကဲ့သို့သော AMC, Vh1, Spike, မှတ်တမ်း, Discovery, Bravo, တစ်ဦးက & E ကိုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးကာစ်တင်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဌာနများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အဖြစ်အဓိကကွန်ရက်များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ပါလိမ့်မည်။
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက် - အပိုင်းအချိန်
အဆိုပါလက်ထောက်ထုတ်လုပ်မှုဒါရိုက်တာအခန်းကဏ္ဍခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ကွန်ရက်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်တစ်တောင်းဆိုနေတာဖန်တီးမှုအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ APD အခြားအရာများကြားတွင်အတူထုတ်လုပ်မှုဒါရိုက်တာနှင့်ကူညီပေးနေ, ကြော်ငြာ၏ကွပ်မျက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဤသည်မှာအခန်းကဏ္ဍကြော်ငြာမော်ကွန်း, ပြောနေကြပါတယ်, dubbing နှင့် On-လေကြောင်းအော်ပရေတာလုပ်ငန်းတာဝန်များကြေညာခြင်းနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့, အရေးအသားလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ယောဘသည်ဖော်ပြချက်:, creativeWrite အကြောင်းကို clients များနှင့်အတူစိတ်ကြိုက် spec spots.Consult ကိုဖန်တီးရန် AES နှင့် client များနှင့်အတူစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုန်ထမ်းများနှင့်အလုပ် loadWork ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် Assist ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်စကားသံကို commercialsRead သို့မဟုတ်ကြော်ငြာ-lib ဘူတာရုံကိုသိရှိနိုင်ဖို့, မိတ်ဆက်နှင့်နီးစပ်ရှိုးများ, နှင့်ဘူတာရုံကိုကြေညာ အားလုံးကြော်ငြာလေကြောင်း correctlyMonitor အာမခံဖို့အသွားအလာနှင့်ဆက်လက်အတူနီးကပ်စွာ breaksWork ...
SR ဒါရိုက်တာ, ထုတ်လုပ်မှုဘဏ္ဍာရေး
အထဲတွင်အိမျဘဏ်ဍာမှပြောပြတယ်အဖြစ်မူလဒါရိုက်တာ, ထုတ်လုပ်မှုဘဏ္ဍာရေးအနေအထားခြုံငုံထုတ်လုပ်မှုဘဏ္ဍာရေးဌာန၏မူဝါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပုံဖော်အတွက်ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာစီးဆင်းမှုနှင့်ပြည်တွင်းထိန်းချုပ်မှုကို process မှပြောပြတယ်အဖြစ်တသမတ်တည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလေ့အထများနှင့်ချဉ်းကပ်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ပါဝင်သည်; ရာထူးလည်းတစ်နာရီတဝက်နာရီများအတွက်ကုမ္ပဏီ s ကို scripted In-အိမ်သူအိမ်သားညျဘဏ်ဍာအားလုံးဖြတ်ပြီး template ကိုဘတ်ဂျက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်, ဒီအနေအထားကို TBS နှင့် TNT အဘို့နေ့ရက်ကိုထုတ်လုပ်မှုဘဏ္ဍာရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖို့နေ့ကိုစီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်, In-အိမ်သူအိမ်သား scripted ထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင်ပါဝင်သည်။ ပင်မတုံ့ပြန်မှုများကိုပြသ၏ပြင်ဆင်မှုပါဝင်သည် ...
Clear ကို Channel ကို Springfield MO ကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုဌာနကခေါင်းတစ်ခုထူးခြားအရည်အချင်းပြည့်မီတစ်ဦးချင်းစီကိုရှာဖွေနေသည်, ဒီဇိုင်းများ; နှင့်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်မှအယူအဆကနေကြော်ငြာတာ, In-အိမ်သူအိမ်သားစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှု ပေး. စီရင်။ In-အိမ်တော်ကိုမှတ်တမ်းတင်ပြောနေကြပါတယ်, ရောစပ်, dubbing နှင့်ကြော်ငြာ၏သိမ်းဆည်းအပါအဝင်စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုစီမံထားသည်။ ဝန်ထမ်းကိုထောကျပံ့ဖို့စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှု assign ။ လိုအပ်အဖြစ်ရေးသားခြင်းစီးပွားဖြစ်မိတ္တူအပါအဝင်စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်. အရောင်းဌာနမှကို Creative ထောက်ခံမှု။ track နဲ့မှန်ကန်သောနေ့စဉ်စီးပွားဖြစ်ကွာဟမှုအစီရင်ခံစာများ။ ယာဉ်အသွားအလာနှင့်ညစဉ်ညတိုင်းပျောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာစစ်ဆေးနေအားလုံးကိုကြော်ငြာလေကြောင်း correctlyAssist အာမခံဖို့ဆက်လက်အတူနီးကပ်စွာဒီဂျစ်တယ်အသံ equipment.Work ၏စစ်ဆင်ရေး ...
ဂီတဒိုင်ယာရီ Media Group သို့တစ်ဦးလွတ်လပ်သောထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ, 12th မှတဆင့်ဒီဇင်ဘာလ 16th ရိုက်ကူးတစ်ဦးမယ့်လွတ်လပ်သောစီမံကိနျးအတှကျတစ်ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်နာငှားရမ်းရန်ရှာနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာစိတ်ကူးယဉ် / စွန့်စားမှုတိုတောင်းသောရုပ်ရှင် (9 မိနစ်) ပါပဲ။ ကျနော်တို့ကအစိမ်းရောင်မျက်နှာပြင် / သံကိုစင်မြင့်ပေါ်လုံးဝရိုက်ကူးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါစံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးတောင်းဆိုချက်များကိုနှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိသည်နှင့်တစ်ဦး VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ set ကိုဒီဇိုင်း / ဆောက်လုပ်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတစ်ဦးဖန်တီးမှုဝိညာဉျကိုရှာဖွေနေပါတယ်။ သငျသညျအရုပ်အသေးစားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်လျှင် - တစ်ပေါင်းပါတယ်။
PRODUCTION LAYOUT အဆိုတော်
-Manuscript ပြင်ဆင်မှု-ခေတ္တ (ဇယား / ဂရပ်များနှင့်စားပွဲဖန်ဆင်းခြင်းအပါအဝင်) အယ်ဒီတာများနှင့်စာရေးဆရာများနှင့်အီလက်ထရောနစ်သက်သေ-စာမျက်နှာအပြင်အဆင်များ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအုပ်စုတစ်စု-လူကုန်ကူးမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးရုံးအဖြစ်စာနယ်ဇင်းပြေးနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေ-အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးများအတွက် -Light မိတ္တူတည်းဖြတ်ရေး-ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင်ပြင်ဆင်မှု ထိုကဲ့သို့သော XML လိုမျိုးဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများဖို့, Mac-Exposure ၏အသုံးပြုမှုအတွက် InDesign-Acrobat Pro ကို-Microsoft Word ကို-စာကျွမ်းကျင်မှုတခုတခုအပေါ်မှာအလေးထားတစ်ပေါင်း-QuarkXPress အတွေ့အကြုံနှင့်အတူထုတ်လုပ်မှု / ဂရပ်ဖစ်အတွေ့အကြုံကို-ကို Adobe CS1 ၏လိုင်စင်နှင့်မူပိုင်ခွင့်-2-6 နှစ်နှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များ တစ်ပေါင်း-ကောလိပ်ဒီဂရီလိုအပ်
တာဝန်နှင့်တာဝန်ဝတ္တရား၏ဤစာရင်းအပြည့်အစုံမဟုတ်ပါ။ ဖြည့်စွက်, ဖျက်ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်အပြောင်းအလဲများကိုသည့်အချိန်တွင်မဆိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖျြောတာဝန်၏ဥပမာ: 1.Directly ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာနှင့်စစ်ဆင်ရေးအဆောက်အဦကိုထောက်ပံ့တဲ့သူထုတ်လွှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအင်ဂျင်နီယာများ, မာစတာထိန်းချုပ်မှုနဲ့ audio အော်ပရေတာများနှင့်ဝန်ထမ်းကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ။ 2.Oversee စတူဒီယို, transmitter ကို, အဆောက်အဦစက်ရုံအင်ဂျင်နီယာနှင့်စနစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ အားလုံးသင့်လျော်သောဆောင်ရွက်မှုများကိုကြီးကြပ်နေဖြင့်အားလုံးဘူတာရုံနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစံချိန်စံညွှန်းများ 3.Ensures ။ 4.Supervise installation နဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်း, အိုင်တီနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများ။ ကြီးမားသောတပ်ဆင်ပေါ်စီမံကိန်းမန်နေဂျာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်လိုအပ်သောအဖြစ်ကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ်မှာလက်ကိုလုပ်ဆောင်တယ်။ အတွက် 5.Assists ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက် - NBA ဒစ်ဂျစ်တယ်
အဆိုပါထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ဖန်တီးမှုထုတ်လုပ်မှု၏အားလုံးဒေသများရှိကူညီပါလိမ့်မယ်။ NBA ဒစ်ဂျစ်တယ်များအတွက်အားကစားဗီဒီယိုကို compile, အကဲဖြတ်ရန်နှင့် log ။ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပရိုမိုးရှင်းအဘို့ဖန်တီးမှုအရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုး။ Learn Post-ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံ: တည်းဖြတ်, အသံဒီဇိုင်းနှင့်အမြင်အာရုံ။
ထုတ်လုပ်မှု Assistant- တီဗီအားကစား
Response: - ဂိမ်း / အင်တာဗျူးများ Log - Talent & ဒါရိုက်တာများအတွက် script များကိုပြင်ဆင်ပါ - chyron သတင်းအချက်အလက်စုဝေး - အင်တာနက်အပေါ်သုတေသနစာရင်းဇယား & ပုံပြင်များ - ဂရပ်ဖစ် & နေဆဲစတိုးဆိုင်နှင့်အတူ Assist - Coordinate ကိုစုသိမ်း & input ကိုသတင်းကွန်ရက်က ticker အဘို့ - Coordinate ဖန်တီးတည်းဖြတ်ထုတ်လွှင့် အရည်အသွေးအပျေါလှငျ - တာဝန်ပေးအပ်ကဲ့သို့သောအခြားတာဝန်များနှင့်တာဝန်များ Perform - ဇာတ်လမ်းအိုင်ဒီယာထောက်ကူပါ - အင်တာဗျူးအားကစားသမားများနှင့်နည်းပြအရည်အချင်းများ / လိုအပ်ချက်များ BASIC အရည်အချင်းများ: - ဆက်သွယ်ရေးပိုမိုနှစ်သက်သို့မဟုတ်ညီမျှလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအတွက် BS သို့မဟုတ် BA degree ကို - ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယိုအလုပ်အတွက်တဦးတည်း (1) နှစ်ကအတှေ့အကွုံအနိမ့် တစ်သတင်းကဏ္ဍနောက်ခံနှင့်အတူပိုမိုနှစ်သက် - ၏စေ့စေ့စပ်စပ်အသိပညာ, ...
အဓိကအားဖြင့်တည်းဖြတ်ရေးအတွက်ဝန်ထမ်းများထုတ်လုပ်မှုယူနစ်နှင့်အတူအဓိကစတူဒီယိုဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အားကစားကွန်ယက်ကိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အသံပြုစုလိမ့်မည်ဟုအဆိုပါရေဒီယိုထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်။ ESPN, Inc, အားကစားအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းခေါင်းဆောင်, 50 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများကျော်နှင့်အတူမာလ်တီမီဒီယာအားကစားပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အကျယ်ပြန့်အစုစုကို featuring ဦးဆောင်နိုင်ငံစုံ, မာလ်တီမီဒီယာအားကစားဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Bristol က, Connecticut တွင်ရုံးချုပ် ESPN 80% Credit: ABC, Inc (အဆိုပါဝေါ့ဒစ္စနေးကုမ္ပဏီ၏လက်အောက်ခံ) ကပိုင်ဆိုင်သည်ကို၎င်း, Hearst Corporation က 20% ။ ESPN ဘီလ် Rasmussen ကတည်ထောင်နှင့်စက်တင်ဘာလ 7, 1979 အပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အခုတော့ 6,500 န်ထမ်းကျော်နှင့်အတူနှစ်စဉ် ESPN ...
ဗိုလ်မှူးတာဝန်များ: - ထုတ်လုပ်မှုစာရင်းထိန်းသိမ်းပါ - ထုတ်လုပ်မှု Tubs (စသည်တို့ကိုဥပမာဖူးစည်းစာတမ်းတွေ, Duet ဂရစ်ဖစ် Drives, မိုက်ကရိုဖုန်းအလံများ, Music, Zip disk, EVS Reels အရောင်း Element ကို Reels, TD Element ကို Reels, တိပ်စတော့အိတ်, X-Files) Build - နှင့်အတူ Assist ပြပွဲ Deliverable (show ကိုဖွင့်ပါ, ခလုတ် / Stamps, ချိုးရန်ချို့ယွင်းမှုများ, ကူးအပြောင်း, ပြန်ဖွင့် Wipe, ရေးအဖွဲ့နှင့် Player ကို frontend, etc & ဖြစ်သော CBS Insert ဂရစ်ဖစ်အထုပ်အဘို့အကြက်သွန်နီအပါအဝင်ဥပမာ Billboard, ပြရန် Animation / Element တွေကို,) - အချို့သောအားလုံးဂီတ Make, ဓာတ်ပုံများ နှင့်ဗီဒီယိုလေထုအဘို့ရှင်းလင်းနေသည် - အာမခံအားလုံး HD ကိုထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်ကျန်တာတွေတွေ့ဆုံခဲ့ကြသည် - ထုတ်လုပ်မှုစာရွက်စာတမ်း (စသည်တို့ကိုဧည့်ဖြန့်ချိပုံစံဥပမာပြီးစီး, ဂီတ Cue Sheet များ) ကိုထိန်းသိမ်းပါ - အလုပ် ...
- တာဝန်ပေးအပ်စီမံကိန်းများအတွက်လေယာဉ်မှူးများနှင့်ပုံစံဘတ်ဂျက်ပြင်ဆင်ပါ - ဘတ်ဂျက်ဖိုင်များကိုထိမ်းသိမ်းမှု - တာဝန်ပေးအပ်ဘဏ်ဍာအဘို့အပတ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်အခြေအနေအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ပါ - အပါအဝင်တာဝန်ပေးအပ်ဘဏ်ဍာများအတွက်တစ်နေ့လျှင်-to-နေ့ကထုတ်လုပ်မှုစာရင်းကိုင်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုစီမံကွပ်ကဲ: - မူဝါဒအကန့်သတ်သည်အလွန်အရောင်းအခွင့်ပြုမည် - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်အပတ်စဉ်ထုတ်သေးအတည်ပြု ငွေသားမသင့် - prep စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက် Assist နှင့်စာရင်းကိုင်ခြုံ - ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းနှင့်အလွတ်တန်းထုတ်လုပ်မှုစာရင်းကိုင်ငှားရမ်း - ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးစာရင်းကိုင်မူဝါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို update - တာဝန်ပေးအပ်ညျဘဏ်ဍာပြည်တွင်းရေးစာရင်းစစ် Coordinate - အာမခံတောင်းဆိုမှုများကိုစီမံခန့်ခွဲ - ထုတ်လုပ်မှုမက်လုံးပေးအစီအစဉ်များ Coordinate နှင့်စီမံခန့်ခွဲ - ထုတ်လုပ်မှုမှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပေး အမှုဆောင်အရာရှိ - ၏ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများ Coordinate ...
WXRT / ချီကာဂို (အရွယ်ရောက် Alternative) အတွက် Creative PRODUCTION ဒါရိုက်တာ။ ဘူတာရုံအသံနှင့်အတူအပတ်စဉ်အထူးနှုန်းများအတွက်အထူးပရိုဂရမ်းမင်း, ပုံရိပ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် XRT လက်မှတ်အစီအစဉ်များအတွက်ဒြပ်စင်: အပါအဝင်လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် -next level.- ကောင်းပြီ-စည်းရုံး Multi-tasker ဤဒဏ္ဍာရီဘူတာရုံယူပြီး၏အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်တစ်ဦးချင်းစီနိုင်စွမ်းရှာဖွေနေ , AV စနစ် AIR ကနေ ProTools ပလက်ဖောင်း, Adobe ကစာရင်းစစ်, AudioVault (အားလုံးရှုထောင့်, ကောင်းစွာ Apple က / Mac ကွန်ပျူတာများကိုလညျးတတျကြှမျးရမည်ပြောနေကြပါတယ်နှင့် copywriting ဒေသခံကြော်ငြာအဖြစ် streaming များနှင့်ဖြစ်သော CBS ဒစ်ဂျစ်တယ် applications.Required အရည်အချင်းများ၏လူအစုအဝေးအဘို့အဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့အကြောင်းအရာထင်နှင့်အဖန်တီးခြင်းနှင့် ဖိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု), ISDN, FTP ကိုနည်းပညာ, နှင့် PR စနစ် & E ကိုအသံလွှင့်ရောနှော consoles စ။ ...
-Office In-အိမ်သူအိမ်သားညွှန်ကြားရေးမှူး (သတ္တုများပုံသွန်း, ခံစားချက်ပျဉ်ပြား, အမြင်အာရုံညွှန်းဆို) -Shoot ညှိနှိုင်းစေးအကြောင်းအရာ-အကူအညီပေးရန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲထဲမှာအုပ်ချုပ်ရေး-Assist (တည်နေရာ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အနုပညာ, ပစ္စည်းကရိယာ) -Reading & အကဲဖြတ်ပျဉ်ပြား & script များအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတစ်ဦးအဘို့အမရရှိနိုင်ပါရှိရမည် သုံးရက် / ရက်သတ္တပတ်၏နိမ့်ဆုံး, 9: 30 AM -5pm တွင်။ (မွန်, Tues, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဟောင်း) -Insistence ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ချက် & မှတဆင့်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ-Follow & preempt နိုင်စွမ်းများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် setting ကို-Desire အတွင်းအလုပ် & နားလည်မှု၏အရည်အသွေးနိုင်ငံတကာသုံးရက်ဆက်တိုက်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်ရန်တိုက်တွန်းထားပါသည်
အငယ်တန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ / ထုတ်လုပ်ခြင်းလက်ထောက်
Krink အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအချိန်အငယ်တန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ / ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ရှာကြံနေပါတယ်။ ကျနော်တို့အထူးစီဘီနှင့်အမှတ်အသားများအဖြစ်အနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်းစီမံကိန်းများထုတ်လုပ်မယ့်ဖန်တီးမှုကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောဦးထုပ်တွေအများကြီးဝတ်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီတစ်နေ့တာတာဝန်များကိုများစွာသောလူအပေါ်ယူပါ။ Krink အနည်းငယ်န်ထမ်းတွေနဲ့သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီ၏, ကောင်းသော Vibe ကောင်းသောလုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဒီအနေအထားအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ဦးအတွက်အကောင်းဆုံး-သင့်လျော်သည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း Self-လှုံ့ဆော်မှုနှင့်၎င်းတို့၏တာဝန်များကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖြစ်ရပါမည်။ ကျနော်တို့အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောတာဝန်များကိုပုစည်းရုံးခံရဖို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အသေးစိတ်-oriented လိုအပ်ပါတယ်သမျှအချိန်လုပ်နေတာ; မရလျှင်သင်လိမ့်မည် ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက် / Editor ကို
ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် entry-level စွမ်းရည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကို join ဖို့အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်တစ်ဦးချင်းရှာကြသည်။ ကျနော်တို့အဓိကရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံစတူဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကုမ္ပဏီများအားဖြည့်တင်း။ သငျသညျအစုပေါ်နှင့်ရုံးတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေဖြင့်ထုတ်လုပ်မှု၏နှစ်ဖက်စလုံးကအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကအချိန်ပြည့်အလုပ်ဖြစ်ပြီးနှငျ့သငျတနင်္ဂနွေအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့တောင်းနိုင်ပါသည်။ - ထုတ်လုပ်မှု / ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲထိနျးသိမျး productions- များအတွက်သမားတွေညှိနှိုင်းရေးနှင့်အလင်းပေးခြင်း, ကင်မရာနှင့်အတူကူညီပေးဖို့ ထား. , Audio- Avid ဆငျဖိုနီပေါ်တွင် company- တည်းဖြတ်စီမံကိန်းများကို running ၏နေ့တာဝန်များကိုဖို့တစ်ရက်နှင့်အတူပိုင်ရှင်အကူအညီပေးရန်အပေါ်အလုပ်လုပ် software- - Avid တည်းဖြတ်ရေးဆော့ဗ်ဝဲနဲ့အတွေ့အကြုံ - Highly ...
ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်မှု၏အားလုံးရှုထောငျ့သင်ယူခြင်းစိတ်ဝင်စားနေသော Intern များရှာကြသည် - Pre-ထုတ်လုပ်မှုကနေ Post-ထုတ်လုပ်မှုရန်။ သငျသညျအုပ်ချုပ်ရေးအလုပ်ကနေအညွန့်အပေါ် Paing မှအရာအားလုံးအပေါ်ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာနှင့်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦးရိုက်ကူးဖြစ်ပျက်အောင်ဖို့အတွက်တတ်သောအရာကိုဖို့ ins နှင့်တနေရာလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအနေအထားနောက်ဆုံးမှာထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ချင်ချင်သောသူတို့အဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကွန်ပျူတာများ, အသေးစိတျ oriented, ကြီးသောအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ဦးတည်ချက်တာမှာကြယ်နှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ရမည်။ သငျသညျထုတ်လုပ်မှုနှင့်အဘယ်ကြောင့်သင်တို့အပေါ်မှာဖြစ်ချင်တယ်အလုပ်လုပ်ချင်အဘယ်ကြောင့်သင့်ရဲ့အဖုံးစာမှာဖော်ပြကျေးဇူးပြုပြီး ...
853 ၏စာမျက်နှာ 857«ပထမဦးစွာ...830840850«851852853854855»...နောက်ဆုံး»
အပိုဒ်မော်ကွန်း လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2018 (247) အောက်တိုဘာလ 2018 (496) စက်တင်ဘာလ 2018 (495) သြဂုတ်လ 2018 (398) ဇူလိုင်လ 2018 (876) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (780) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (685) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (608) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (122) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (358) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "စပွန်ဆာပေးသူများ MPSE နှင့် CAS ဒါနဂေါက်ကွင်းနှင့် Poker ပြိုင်ပွဲများအတွက်ကြေညာလိုက်သည်" ။ https://www.broadcastbeat.com/sponsors-announced-for-mpse-and-cas-charity-golf-and-poker-tournament/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။